दशैको टिकामा कस्तो आर्शिवाद दिने ? के छ महत्व ? – Online Kendra
२९ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०७:०० OnlineKendra
आज विजयदशमी । मान्यजन, आफन्तबाट टिका थाप्ने दिन । निधारमा रातो (कतिले सेतो) टिका थापेर, जौबाट उमारिएको जमरा पहिरिएर मान्यजनबाट आशिष लिने गरिन्छ । आशिष अर्थात आर्शिवाद । आफ्नो उन्नती, प्रगति, दीर्घायुका लागि मान्यजनले राख्ने सदिच्छा ।
हुन त अहिले धेरैले टिका लगाइदिएपनि आशिष (श्लोक बाचन) गर्दैनन् । कतिले यसलाई कष्ठ गरेका हुादैनन्, कतिले यसको भाव बुझेका हुादैनन्, कतिले यसको आवश्यक्ता महसुष गर्दैनन् ।
दशैंमा टिका लगाइदिदै दिने आशिष संस्कृत भाषामा छ । महिला र पुरुषलाई दिइने आशिषमा पनि एकरुपता छैन । आखिर आशिषले के भन्छ ? किन दिइएको ?
यो एउटा संस्कार हो । संस्कार भनेको जीवन पद्दतीलाई डोहोर्‍याउने सर्वोत्तम माध्याम हो । दशैंमा टिका थाप्ने, जमरा पहिरिने, आशिष लिने, दक्षिणा लिने कुरा केवल परम्परा मात्र होइन, यसमा हाम्रो जीवनको मूल्य र मान्यताहरु पनि लुकेका छन् ।
दशैंमा अक्सर आफुभन्दा ठूला, मान्यजनबाट टिका लगाइन्छ । यसले मान्यजनप्रति श्रद्धाभाव राख्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । मान्यजनले दिने आशिष हाम्रो निम्ति जीवनोपयोगी हुन्छ भन्ने पनि हो । साथै ठूलाबडाहरुले आफुभन्दा सानालाई सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ । सही संस्कार दिनुपर्छ भन्ने हो । दशैंको आशीष यसमै आधारित छ ।
टिका लगाउादा दिने आशिष यस्तो छ-
विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च
द्रोणपुत्र अस्वत्थामको जस्तो लामो आयु अर्थात दीर्घायु हुनु । दशरथ राजाको जस्तो धनसम्पति होस् । भगवान रामको जस्तो शत्रु नाश होस् । नहुष राजाको जस्तो ऐश्वर्य होस् । पवनसुत हनुमानको जस्तो गतिशिलता होस् । दुर्योधनको जस्तो मान होस् । सूर्यपुत्र कर्णको जस्तो दानवीरता होस् । हलधर बलरामको जस्तो बल होस् । कुन्ती पुत्र युधिष्ठरको जस्तो सत्यवादिता हुनु । विदुरको जस्तो ज्ञान होस् । भगवान नारायणको जस्तो कीति वा प्रशिद्धि होस् ।
यसरी मान्यजनले आशिष दिदै लगाइदिने टिकाको पनि निकै अर्थपूर्ण छ । टिका जसलाई अक्षता पनि भनिन्छ, दही, चिनी, रातो रंगमा मिश्रण गरिएको चामलको टिका निधारको मध्यभागमा लगाइन्छ । यसरी टिका लगाइदिने निधारको मध्यभागलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ । यो दुबै आँखीभौंको माझमा हुन्छ । यसलाई तेस्रो नेत्र अर्थात तेस्रो आँखा भनिन्छ । आज्ञा चक्र स्पष्टता र बुद्धिको केन्द्र हो । यसले मानव र दैवी चेतनाको मध्य सीमा निर्धारण गर्छ ।
यसको अर्थ के बुझन् सकिन्छ भने ठूलाबडा, मान्यजनले हामीलाई धन, बुद्धी, स्वास्थ्य सबैकुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति तेस्रो आँखा खुला राख भनेको हुन् ।
Top Headline, समाजदशैको टिकमा कस्तो आर्शिवाद दिने ? के छ महत्व ?